I-Pokémon Go iya kubandakanya izidalwa ezitsha ezili-100 ngoDisemba | Iindaba zeGajethi
I-Pokémon Go iya kubandakanya izidalwa ezintsha eziyi-100 ngoDisemba
Kutshanje iDitto, eyona Pokémon ikhethekileyo yesaga yokuqala, ekugqibeleni yafika ePokémon GO. Kodwa yayilixesha lokujonga owona mdlalo uthandwa kakhulu kule minyaka idlulileyo, I-Niantic iye yehla ishishini kwaye yabhengeza ukuba ngeenxa zonke ikhulu lezidalwa ezitsha ziya kufika kuhlaziyo lomdlalo ngoDisemba. Asazi ukuba ingakanani inyani okanye imfihlakalo ekhoyo kwezi zalathiso zintsha, into esiyicaceleyo kukuba inokuba ngumphefumlo womoya omtsha kumdlalo wevidiyo ongathandabuzekiyo obonakala ngathi "ufile kunokuba usaphila", kwaye kungenxa yokuba Umsindo wePokémon Yiya ngasemva ngasemva, kude ngasemva.
Ngakumbi ukuba kunokwenzeka ngoku ukuba siyayazi loo nto I-Pokémon iLanga kunye neNyanga ziyimpumelelo yokwenene kwintengiso, Ukuthengisa ngokukhawuleza kwenkqubo yeNintendo 361DS ngama-3%. Ngokuqinisekileyo, Asinayo idatha echanekileyo malunga ne-100 yePokémon entsha ukuba iNiantic izakubandakanya kolu luhlu lwesibini lwezidalwa, nangona sicinga ukuba iimodeli zesizukulwana sesibini ziya kuqala ukubonakala, kuba uninzi lwabo babonwayo ukuza kuthi ga ngoku lusisizukulwana sokuqala.
Ukongeza, amarhe acebisayo ukuba ekugqibeleni baya kubandakanya amadabi phakathi kwabadlali bokwenyani, nangona kunjalo, oku kubonakala kunzima kakhulu, kuba iya kuba yinto enokwenza kube nzima ukuthengisa imidlalo eqhelekileyo, okanye ubuncinci yenze ukhuphiswano olubalulekileyo.
Ngamafutshane, akukho nto incinci yeNiantic yokunyusa ngokuthe ngcembe inani lePokémon efumaneka kwiPokémon Go, into esele ithembisile ngomhla wayo, kodwa oko kubonakala ngathi kusemva kwexesha, ukunyaniseka, I-Pokémon Go ayisenazo iimfanta ezazikade zinazo, ifashoni sele idlulile, ke abasebenzisi abona bantu babanjiswe kakhulu zizidalwa ezizodwa kuya kufuneka bazinzise olu hlaziyo. Akukho nto ifana noMfana wethu omdala woMdlalo kunye nePokémon Red.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Pokémon Go iya kubandakanya izidalwa ezintsha eziyi-100 ngoDisemba
Uhlaziyo lwamva nje lweXiaomi lubhloka amawaka ezixhobo